Ciidamada DKMG ah oo Dagaalo dhacay Maanta Guulo ka sheegtay – SBC
Ciidamada DKMG ah oo Dagaalo dhacay Maanta Guulo ka sheegtay
Muqdisho- Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho caasimada Dalka ayaa sheegaya in dagaalo xoogan oo halkaasi ka dhacay ay guulo ka soo hoyeen ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya inkastoo ay beenisay Xarakada Alshabaab oo iyadu halkaasi kula dagaalantay DKMG ah.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada DKMG ah ay hareereeyeen suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho iyagoona ka soo galay sedax Jiho oo kala ah Wadada Howlwadaag, Aaga Masjidka Biimaaloow iyo weliba Isgoyska Suuqa.
Ciidamada DKMG ah ayaa la sheegay in xoogaga xarakada Alshabaab weeraro ay ku qaadeen islamarkaana uu dhexmaray dagaal xogan, taas oo iyagana u suurto gelisay in ay guulo wax ku ool ah soo hoyaan iyagoona qabsaday deegaano badan oo ay ka mid tahay Wadada Wadnaha iyo Suuqa Bakaaraha.
Inkastoo ay sheegteen ciidamada DKMG ah Guulahan ayaa ahadana waxaa wararkaasi Been Abuur ku tilmaamay Afhayeenka Xarakada Alshabaab Sh Cali dheere isagoona sheegay xili uu la hadlayay saxaafada Muqdisho in weeraro ay soo qaadeen ciidamada DKMG ah ay iska caabiyeen dagaal xooglehna ay lagaleen.
Sikastoo ay ahaataba dagaalada Maanta ka dhacay Muqdisho ayaan la ogaankarin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay inkastoo ay jiraan warar ku aadan khasaare aad ubadan oo dagaalkaasi ka dhashay kuwaas oo la gaarsiiyay goobaha Caafimaadka .